Fomba fandokoana geometrika pejy tsara - pejy fandokoana maimaim-poana
Endrika fandokoana geometrika
Tsy voatery ho ny sokajy manaitra indrindra amin'ny tranokalanay, fa mbola zava-dehibe ny fahafantaran'ny ankizy sy ny fahaizany manome anarana ireo endrika geometrika fototra lehibe indrindra. Ary mora kokoa ny mianatra raha afaka mandoko amin'ny endriny ianao avy eo.
Ho fanampin'izany, ny endrika géometrika dia mipoitra avy eo amin'ny matematika ary koa mamorona singa fototra amin'ny famolavolana zavakanto. Antony ampy ahafahanay manolotra ny sokajy endrikay geometrika manokana. Ny tsindry iray amin'ny sary dia manokatra ny môdely fandokoana geometrika amin'ny endrika pdf:
Teny lakile fanampiny: geometrisch, geometry
Faribolana pejy fandokoana | Endrika Geometrika
Pejy fandokoana jeometrika
Ny endrika géometrika dia mamolavola ny ambaratonga voalohany